Kitra – Fifaninanam-paritra : lasan’i Mahajanga ny amboara sy ny vola 20 tapitrisa Ar | NewsMada
Kitra – Fifaninanam-paritra : lasan’i Mahajanga ny amboara sy ny vola 20 tapitrisa Ar
Nikatona, omaly ny ridaon’ny fiadiana ny amboaran’ny faritra, notanterahina taty amin’ny kianja RabemananjarA, omaly. Norombahin’ny ekipa voafantin’i Mahajanga ny amboara sy ny vola 20 tapitrisa Ar ho an’ny laharana voalohany.
Efa nitarika 1 noho 0 tamin’ny alalan’ny baolina nampidirin’i Zolah (37mn) Antsiranana teo amin’ny fizaram-potoana voalohany saingy resin’i Mahajanga ihany izy ireo teo amin’ny fizaram-potoana faharoa. Nosalahan’i Yvon (61mn) izany ary mbola nampian’i Sido, telo minitra taorian’io. Niady ny fihaonan’ny roa tonta. Nanatombo teo amin’ny fanafihana anefa ny tompon-tanàna raha nihanona amin’ny valim-panafihana kosa ny solontenan’Antsiranana. “Hita ihany ny fahabangan’ny vodilaharanay satria tsy afa-nilalao izy noho ny karatra efa azony. Nihevitra izahay fa hifarana eo amin’ny manasa-dalana ny dianay saingy izao tafiditra laharana faharoa izao. Hiezaka hanao ny tsaratsara izahay satria manana mpilalao tanora”, hoy ny mpanazatra avy any Diana, Raharijaona Lucien. Nanamafy izany ny kapiteny, Lao fa efa nivonana amin’ny fandresena izy ireo. Niaiky koa anefa ny tenany fa tsy mbola zatra ady ny ekipany. Na izany aza, nahazo ny vola 10 tapitrisa Ar Antsiranana.
Ho an’ny mpanazatra an’i Mahajanga Titi Rasoanaivo kosa, nambarany fa nanana tombony ny ekipany. “Teto amin’ny taniny izy ary teo koa ny mpijery, nanohana. Niezaka ny nanao ny tsaratsara izahay ka nahomby, indrindra teo amin’ny fizaram-potoana faharoa”, hoy izy.
Voahosotra ho mpilalao mendrika, Yasser ary mpampidi-baolina be indrindra Sidonie, izay nahatafiditra baolina enina. Marihina fa samy mpilalaon’i Mahajanga, avokoa izy mirahalahy.
Synèse R. (Iraka manokana aty Mahajanga)